ရန်ကုန်သင်္ကြန် ဗုံးခွဲမှု တရားစွဲခံရသူ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရန်ကုန်သင်္ကြန် ဗုံးခွဲမှုနဲ့ တရားစွဲခံထားတဲ့ ကိုဖြိုးဝေအောင်ဟာ အသည်းဝေဒနာ ခံစားနေရလို့ အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ကုသတာမျိုး၊ အပြင်ဆေးရုံမှာ ကုတာမျိုး လိုအပ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ကန်တော်ကြီးနဘေးရှိ X2O သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွင် ၂၀၁၀ ဧပြီ ၁၅ ရက် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့က ဗုံးသုံးလုံး ဆက်တိုက် ပေါက်ကွဲသဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကို လူနာတင်ယာဉ်ပေါ်သို့ တင်ဆောင်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
ဒါပေမယ့် ထောင်အာဏာပိုင်တွေက မလုပ်ပေးဘူးလို့ မနေ့က အင်းစိန်ထောင်မှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မဌေးဌေးက RFA ကို ပြောပြပါတယ်။
"သူက ရင်ဘတ်တခုလုံးနာပြီးတော့ မထိုင်နိုင်ဘူးလေ။ မှောက်ခုံကြီး မှောက်နေရတယ်။ နေမကောင်း စဖြစ်တာကတော့ ဒီနှစ်တလပိုင်းထဲကပေါ့နော်။ဖျားတယ်၊ ဖျားတယ်နဲ့ အဲကနေပြီးတော့ အသဲရောင်တယ်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ အသဲမှာ အကြိတ်တွေ့တယ် ဆိုတာက ၃ လပိုင်းတုန်က သိရတာပါ။ ခု အသည်းဖြစ်ပြီ ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ အထူးကုနဲ့ပြဖို့ လိုပြီပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်ထိ ထောင်မှာလာကြည့်တာမျိုးကော၊ အပြင် refer ထုတ်တာမျိုးကော ဘာမှမလုပ်သေးဘဲ ထားထားတယ်။"
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၈ ရက်နေ့က ကိုဖြိုးဝေအောင်ကို အင်းစိန်ဆေးရုံက ဆရာဝန်တဦးက ထောင်မှာ အတ်ထရာဆောင်း လာရိုက်ပေးပေမယ့် အင်းစိန်ထောင်က ultrasound ရိုက်တဲ့စက်ကပျက်နေတော့ ရောဂါအခြေအနေကို မခန့်မှန်းနိုင်ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ထောင်မကျခင်ကတည်းက ကိုဖြိုးဝေအောင်မှာ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ပိုးရှိပြီး အသည်းမှာ ပြည်တည်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူ့ကို ပြင်ပဆေးရုံမှာ ဆေးကုခွင့်ရဖို့၊ အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ကုခွင့်ရဖို့ကို ထောင်အာဏာပိုင်တွေထံ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့မှာ မိသားစုက စာရေးတင်ပြထားပေမယ့် ခုထိ ဘာမှ အကြောင်းမပြန်သေးဘူးလို့ မဌေးဌေးက ပြောပါတယ်။
"ထောင်ပိုင်ရယ်၊ ထောင်တာဝန်ခံအရာရှိရယ်၊ ပြီးတော့ ထောင်တာဝန်ခံ ဆရာဝန်ရယ်ကို ကိုဖြိုးဝေအောင်ရဲ့ညီ ဒေါက်တာထက်ဝေအောင်က စာရေးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မိတ္တူကို သမ္မတတို့ ဘာတို့ဆီကို ပို့ထားပါတယ်။ စာထဲမှာ အင်းစိန်ဆေးရုံမှာ ထွက်ပြီးတော့ အတ်ထရာဆောင်း ရိုက်ခွင့်ပေးဖို့ရယ်၊ အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ ရီဖားထုတ်ပြီးတော့ ကုသပေးဖို့ရယ်၊ လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကို မိသားစုက ပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး ကျမတို့ စာတင်ထားပါတယ်။"
ကိုဖြိုးဝေအောင်ရဲ့အမှုကို လာမယ့် မေလ ၈ ရက်နေ့မှာ တရားရုံးက အမိန့်ချမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမိန့်ချပြီးတဲ့နောက် အခုလိုကျန်းမာရေး ဆိုးနေချိန် မိသာစုနဲ့ဝေးလံတဲ့ ထောင်တွေဆီ ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခံရမှာကို စိုးရိမ်နေတယ်လို့လည်း ကိုဖြိုးဝေအောင်ရဲ့ဇနီး မဌေးဌေးက ပြောသွားပါတယ်။
တာမိုးညဲမှာ မိုင်းပေါက်ကွဲ မှုကြောင့် ဒေသခံ ၂ ဦး သေဆုံး
မိုးညှင်းမှာ မိုင်းပေါက်ကွဲပြီး ဒေသ ခံနှစ်ဦး သေဆုံး
စိုက်ခင်းများအနီး မိုင်းမထောင် ဖို့ ဒေသခံတောင်သူများ ဆန္ဒပြ
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြေ ငှားရမ်းမှု လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး
သင်္ကြန်ရက်တွေအတွင်း အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ထုတ်ပြန်
သတင်းထောက်နေအိမ် ဗုံးခွဲမှု စုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့ RSF တောင်းဆို
ချင်းရွှေဟော် နယ်စပ်မြို့ ဗုံးကွဲမှု လူ ၃ ဦး သေဆုံး
သေလိုက်လေ... မင်းကြောင့်တောင် အပြစ်မရှိတဲ့ သူတွေအများကြီး သေခဲ့ရပြီးပြီ...သွေးစွန်းတဲ့သင်္ကြန်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီ...ချက်ချင်းတော့ မသေနဲ့ဦး...မင်း အကြာကြီးခံစားပြီးမှသေ... နောက်ဖြင့်ဆို မတန်မှာစိုးလို့..
May 02, 2012 07:27 AM
They are still using and following their usual ways like Facist ,till now. Where are their Changes ?
May 02, 2012 04:37 AM